OBS Studio 27.1 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweWayland, Youtube Kutenderera uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
OBS Studio 27.1 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweWayland, Youtube Kutenderera uye nezvimwe
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni ye OBS Studio 27.1 umo makaitwa shanduko dzakakosha, idzo kubatana kweYouTube pasina kushandisa kiyi yekutumira inomira, kutsigirwa kwekukweva nekudonhedza kuendesa zviitiko uye masosi muLinux uye nezvimwe.
Kune uyo ari uchiri kuziva OBS Studio, vanofanira kuziva izvozvo chinangwa yeOBS Studio kusimudzira ndeyekugadzira yemahara vhezheni yeOpen Broadcaster Software application izvo zvisina kusungirirwa kuchikuva cheWindows, inotsigira OpenGL uye inowoneka kuburikidza nemapulagi
Musiyano uyu zvakare kushandiswa kweyakavakirwa modular, zvinoreva kupatsanurwa kweiyo interface uye musimboti wechirongwa. Inotsigira transcoding yenzizi dzekutanga, kutorwa kwevhidhiyo panguva yemitambo, uye kuyerera kuTwitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox, uye mamwe masevhisi. Kuchengetedza kushanda kwepamusoro, zvinokwanisika kushandisa michina yekumhanyisa Hardware (semuenzaniso, NVENC uye VAAPI).
1 Main nyowani maficha eBBS Studio 27.1
1.1 / Maitiro ekuisa OBS Studio 27.1 pane linux?
1.1.1 Kuisa OBS Studio 27.1 kubva Flatpak
1.1.2 Kuisa OBS Studio 27.1 kubva kuSnap
1.1.3 Kuisirwa kubva kuPPA (Ubuntu uye zvigadzirwa)
1.1.4 Arch Linux uye zvigadzirwa
Main nyowani maficha eBBS Studio 27.1
Mune ino vhezheni nyowani yeOBS imwe yemitambo mikuru inomira kunze ndeye Tsigiro yekubatanidzwa neYouTube vhidhiyo yekugamuchira, ichikubvumidza iwe kuti ubatanidze kuakaundi yako yeYouTube usingashandise kiyi yekushambadzira.
kunze kwaizvozvo bhatani idzva rinonzi "Manage Streaming" rakaunzwa Kugadzira uye kugadzirisa YouTube hova, rwizi roga roga runogona kupihwa iwo wega musoro wenyaya, tsananguro, zvakavanzika marongero, uye kuronga nazvo. Iyo inomiririra wizard inopa kugona kuyedza bandwidth. Ini ndaita yekutaurisa panhare yeruzhinji uye yakavanzika nhepfenyuro, iyo ichiri kuverenga-chete.
Kune rimwe divi, mune iyo yekuchinja shanduko mhedzisiro (Stinger Shanduko) muTrack Matte modhi, iyo inopa shanduko pamwe panguva imwe chete kuratidzwa kwezvikamu zveiyo nyowani uye yekare chiitiko, Wakawedzera "Mask chete" sarudzo.
Zvekushambadzira masosi Bhurawuza Chitubu, kutsigirwa kushoma kweOBS kutonga kunoitwa, iyo inoda yakajeka mvumo yemushandisi, pamwe nesarudzo yekuratidza nzvimbo dzekuchengetedzwa mukutarisa (zvakafanana nemuwonero wemazhinji) yakawedzerwa.
Uye mu manyuko ezve skrini muzvikamu zveWayland izvozvi zvave kuwanikwa pasina chikonzero chekutanga OBS neye yakatsaurwa yekuraira mutsara sarudzo, pamwe nekukweva-uye-kudonha rutsigiro rwekutamisa zviitiko uye mafonti paLinux yakawedzerwa zvakare.
Chekupedzisira kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni nyowani, unogona kutarisa iyo ruzivo mu inotevera chinongedzo.
/ Maitiro ekuisa OBS Studio 27.1 pane linux?
Kuisa OBS Studio 27.1 kubva Flatpak
Kuisa OBS Studio 27.1 kubva kuSnap
Kuisirwa kubva kuPPA (Ubuntu uye zvigadzirwa)
Arch Linux uye zvigadzirwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » OBS Studio 27.1 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweWayland, Youtube Kutenderera uye nezvimwe
Exim 4.95 inosvika neyakagadzikana mitsara kugadzirisa, kugadzirisa, uye zvimwe